PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - BAZOMASHELA AMAZIMUZIMU
Ilanga langeSonto - 2017-11-12 - Izindaba - ZAKHELE MCHUNU
IBANDLA lamaluthela lihlele ukhukhulelangoqo wenhlabaluhide yokulwisana nobuzimuzimu endaweni yasemtshezi ezokuba ngolwesibili kusuka ngo-12 emini kuya ku-14h00 kuleli dolobha eliholwa ngunkk Jabu Mbhele oyimeya.
Umfundisi untuthuko Nkosi ( osesithombeni) wephangweni Parish, khona emtshezi, utshele ILANGA Langesonto ukuthi bakhathazeke kakhulu beyibandla ngesimo sakule ndawo okuqhubeka kuyona icala labasolwa ngokuba ngamazimuzimu. Isimo sishuba ngaso sonke isikhathi nxa kuqulwa leli cala elethusa abaningi emtshezi namaphethelo okwenza kuvalwe nezingxenye ezithile zemigwaqo yakuleli dolobha.
“Nakuba izisulu zingakhonzi eluthela kodwa zihlala ngaphansi kwePhangweni Parish. Ngakho kuwumsebenzi wethu njengebandla ukulwisana nobubi obenzeka emphakathini. Sibugxeka kakhulu ubuzimuzimu ngoba buphazamisa inhlalakahle yomphakathi, ugcine sewuphila ngokwethuka izanya.
“Phela ibandla limele ujesu Kristu emhlabeni, liyiso lakhe, liyizindlebe zakhe futhi liyizandla zakhe. Kumele sakhe isizwe esinozwelo, esibeka phambili inhlalo enhle emphakathini,” kusho umfu Nkosi onxuse amaluthela ukungquzuka kuzona zonke izinkalo ukuyoseka le nhlabaluhide.
Ucela ukuba amaluthela afike edlubhe umfaniswano waleli bandla kule nhlabaluhide ezoqala erenki endala yasentabamhlophe engasesilaheni sakwajackie,
idlule phambi kwasiteshi samaphoyisa, ize iyophelela ehholo lakuleli dolobha.
Ugcizelele ukuthi kule nhlabaluhide kwamukeleke wonke umuntu onesifiso sokubona umphakathi wasemtshezi uhleli ngokuthula. Uthi nabaqhamuka kwamanye amahlelo bamukelekile ukufika nemifaniswano yamabandla abo.
“Sizofika ehholo lasemtshezi sesilindwe ngumeya nomphathisiteshi wasemtshezi ukwamukela izikhalo zethu bese senza umkhuleko. Sizokhanyisa nekhandlela ukukhumbula bonke asebadlula emhlabeni, izisulu zobuzimuzimu, siphinde sikhulekele nawo uqobo amazimuzimu ukuba ujehova awahawukele ukuhlukana nalo mkhuba omubi,” kusho umfu Nkosi.
Nakuba le nhlabaluhide ihlelwa yiphangweni Parish, kodwa kulindeleke ukuba iqhaza libanjwe cishe yiwona wonke ama- parish angaphansi kwesekethe lasondini eliholwa ngumengameli umfu Sibusiso Xaba naye ozinze ephangweni Mission.